Isakhiwo sokudibanisa kunye nesakhiwo seBrand kunye neSemalt
Yintoni iLink yokwakha?
Ukubaluleka kwesakhiwo soNxibelelaniso
Ungazisebenzisa njani izicwangciso zeBhloko yoKwakha iiNkxaso zoKwakha iiKhonkco
Isidingo sokwenza amakhonkco asezingeni eliphakamileyo akakaze abaluleke kakhulu ekusekeni iwebhusayithi yakho njengegunya kwi-niche yakho. Ukwakha ikhonkco ngokuqinisekileyo kuya kusiba nzima ngakumbi njengoko iGoogle iqhubeka nokuhlaziya imithetho yayo, kwaye ifuna indibaniselwano yendlela eyahlukileyo, imibono, kunye nezenzo ukufezekisa iziphumo ezilungileyo.
Jonga kuyo yonke i-intanethi kwaye uyakuqonda ukuba ii-brand abomeleleyo ziyalawula iwebhu. Kuyanyanzeleka ke ukuba uqale ukubona ulwakhiwo lwekhonkco njengesixhobo esibalulekileyo sokwenza uphawu, ukanti kwangaxeshanye ubone uphawu njengendlela yokunceda ukwakha amakhonkco aphezulu. Ukuqonda oku kuye kwenza ukuba abantu abaninzi bathi ukwakhiwa kwesixhumanisi kuyafana nokwakha uphawu. Ku-Semalt, siyazi ukuba le nyaniso yile migaqo mibini isebenzisana ukukunika impumelelo kwishishini liphela. ¬
Yintoni ikhonkco ekwakheni?
Ukwakha ikhonkco yinkqubo yokufumana okanye yokufumana ii-hyperlink ezivela kwezinye iiwebhusayithi kwi-intanethi ukuya kwindawo yakho. I-hyperlink (ebizwa ngokuba yi-link) yindlela yokuhamba phakathi kwamaphepha kwi-intanethi.
Iinjini zokukhangela, ezinjengeGoogle, zisebenzisa amakhonkco okukhasa kwiwebhu - zirhubuluza amakhonkco aphakathi kwamaphepha ahlukeneyo kwiwebhusayithi yakho, kwaye zikhasa naluphi na unxibelelwano olukhona phakathi kwewebhu nganye.
1. Inceda ngokusebenza kweinjini yokukhangela: Zimbini iindlela ezisisiseko ezenziwa nguGoogle ukusebenzisa amakhonkco. Esokuqala kukufumana amaphepha amatsha kwiwebhu kwaye elesibini kukuwanceda ukuba abeke amaphepha ngokufanelekileyo kwiziphumo zawo.
Nanini na xa iinjini zokukhangela zikhwela amaphepha ewebhu, banokukhupha imixholo yamaphepha kwaye bawafake kwizalathiso zabo. Yindlela abanokuthi baqonde ngayo ukuba iphepha liyazifezekisa iimfuno zabo ezisemgangathweni kwaye lifanelekile ukuba libekwe kakuhle ngokwamagama afanelekileyo.
Umxholo wephepha lakho ayisiyiyo kuphela into ekubonayo ukuba ikunika indawo kwiGoogle TOP 100 -Google ikwaqwalasele inani leekhonkco eziza nekhasi kwiphepha elibuzwe kwezinye iwebhusayithi kunye nomgangatho wezo siza zangaphandle. Oku kuthetha ukuba unethuba elingaphezulu lokumiselwa ngcono kwiziphumo zokukhangela njengoko iwebhusayithi ekumgangatho ophezulu inxibelelanisa neyakho.
Uninzi lwee-injini zokukhangela luye lwasebenza gadalala kwaye lwasetyenziselwa lo mbono; ke, uGoogle uqalise ngokukhuphela uhlaziyo lwemithetho yabo ukunqanda le mikhwa. UGoogle ukhe waqhekeza inani lewebhusayithi ezenze ngcono amakhasi alo ewebhu ngezohlwayo ezoyikekayo zikaGoogle. Kunqabile ukuba iwebhusayithi ibuye kwakhona kwezozohlwayo. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba abanini bewebhu basebenzise umxholo wokwakha amakhonkco ngokulinganisela.
Ngendlela efanayo amakhonkco asezingeni eliphakamileyo anokuzuzisa iwebhusayithi yakho ngokukunika indawo entle kwiGoogle TOP, amakhonkco asezingeni eliphantsi anokuba yingozi ekuma kwakho kwi-TOP. Ezinye iiwebhusayithi ezikhuphisanayo zinokufuna ukusebenzisa izicwangciso-qhinga ezimnyama ze-SEO zokuzisa phantsi ukuze zikwazi ukunyuka njengesiphumo. Ke, kuya kuba kuhle ukuba usoloko ulumkele ukungawaniki amakhonkco onxibelelwano. KwiSemalt , sihlala sikulumkele abathengi bethu.
2. Inceda ukwandisa ukuhambisa okukuthunyelwa: Iinxibelelaniso ngokuqinisekileyo zikunceda ukufikelela kwindawo yakho oyifunayo kwiGoogle TOP kodwa uyazi ukuba bangakwazi nokuqhuba ukugcwala kwiwebhusayithi yakho? Ikhonkco eliphakamileyo elisuka kwiwebhusayithi eqhele ukutyelelwa linokuyalela ukugcwala kwabo kwindawo yakho. Kwaye ukuba iwebhusayithi yabo iyenye ehambelana nale nto uyenzayo, kukho amathuba aphezulu okuba izithuthi ezithunyelweyo zizokuhlawula abathengi.
Ke ngoko, ukunxibelelana okwakha nezinye iisayithi akupheleli kwinani lezithuthi abazifumanayo kodwa malunga nokuhambelana kwezithuthi zabo kwinto onokuyifumana kwiwebhusayithi yakho.
3. Kuyanceda ukwakha ubudlelwane: Amaxesha amaninzi, ukwakha ikhonkco kuya kubandakanya ukufikelela kwiibhloko ezifanelekileyo kunye nesiza kwi-niche yakho. Uninzi lwexesha, ufikelela kwezi zinto zinamandla zokunceda ukukhuthaza umxholo wakho osandula ukwenziwa kwaye esona sizathu siphambili kukufumana ikhonkco kubo uGoogle anokuthathela ingqalelo njengento yokukumisela kakuhle.
Ngoku isibonelelo se-SEO, ukufikelela kwabo banefuthe kumashishini wakho kunokukunceda wakhe ubudlelwane bexesha elide kunye nabo obuya kuphakamisa inqanaba lakho lokukholeka emehlweni abathengi bemveliso yakho.
4. Inceda kulwakhiwo lophawu: Xa isakhiwo sekhonkco senziwe ngokufanelekileyo, sinokukunceda ukuba ube ligunya lezemveliso ngokwenza ukuba uphawu lwakho lubonakale njengolunye.
Ukudalwa komxholo yenye yeendlela ezininzi zokwakha ezinokukunceda ubonise abathengi abanokubakho ubungcali bakho, obunokukunceda wakhe uphawu lomelele ngakumbi.
Masithi udala isiqwenga somxholo usebenzisa idatha efanelekileyo eqokelelweyo evela kumzi mveliso kwaye uyipapasha kwi-Intanethi, amathuba kukuba ukuthandwa kwakho kushishino lwakho kuyonyuka. Ke xa ufikelela kwabanye abantu abakwishishini lakho ukufumana amakhonkco, ubonakalisa ubuchule bakho kwaye kwangaxeshanye usasaza umxholo wakho kubabukeli ngokubanzi.
Ngendlela efanayo edibanisa isakhiwo esinokunceda ekwakheni uphawu, kukwakho neendlela zokwenza izakhiwo ezinokusetyenziselwa ukunceda ukwakha unxibelelwano olusebenzayo. Makhe sihlolisise ezinye iindlela ezisetyenziswa ngabachwephesha bobuchwephesha kwaye sibone ukuba zingasetyenziswa njani kulwakhiwo lwekhonkco.
1. Imvelaphi, Umgangatho kunye nokuPhakathi kwesiqulatho kunye nokuNxibelelana: Umgangatho womxholo wakho kunye nokudibana kuya kuhlala uxelela abathengi bakho abaza kubakho ngomgangatho weemveliso okanye iinkonzo ekufuneka unikezele ngazo. Ngalo lonke ixesha qinisekisa ukuba usoloko usezandleni zakho xa uphuma umxholo okanye ufaka isandla kwiingxoxo kwenye iwebhusayithi okanye iibhlog. Okukhona usondeza umxholo ongaguqukiyo, okomgangatho wokuqala kunye nomgangatho, kokukhona intembelo yakho yentengiso iba. Kwaye kokukhona unegunya, uya eba likhonkco lezinto eziphilayo oqalisa ukuzivelisa.
2. Ukubekwa kweBrand: I- Strategists yesicwangciso-nkqubo soze ikujonge ukujolisa kubaphulaphuli abafanelekileyo. Ngendlela efanayo, umgangatho wesigama sakho somyalezo ubaluleke ngokulinganayo njengokujolisa kwiiwebhusayithi ezifanelekileyo kunye nokupapashwa.
Nanini na xa ukwiphulo lokufumana ikhonkco, ngalo lonke ixesha uzibuze ukuba ngaba isicwangciso-qhinga siza kuyiphathela na uphawu lwakho kwindawo oyifunayo.
Isindululo sexabiso lakho elikhethekileyo uphawu kufuneka luhlala lunendawo kuyo yonke imixholo kunye nokusebenzisana kwi-Intanethi. Kuya kufuneka usebenzise amakhonkco njengeebhuloho kubantu abanomdla kwinto onokuyinikezela ngayo uphawu lwakho. Ke, fumana amakhonkco kwiiwebhusayithi ezinabaphulaphuli bakho kwaye wenze ukuba kube lula ukuba bakufumane.
Eyona nto iphambili ekufumaneni amakhonkco aphucula ukuqonda komgangatho kunye nokusebenza kweinjini yokukhangela kukuba nemiyalezo yophawu lomgangatho kwiiwebhusayithi ezifanelekileyo.
3. Ukwakha ubudlelwane: Ukumema oontanga beshishini ukuba babe negalelo kumxholo wewebhusayithi yakho kwaye ubenzele kunye nesicwangciso esiliqili sokubonisa uphawu esinokukunceda wakhe amakhonkco. Ukunxulumana kwakho nezinye izinto ezithembakeleyo kushishino lwakho kuya kukunceda ubonakale uthembekile kwaye uthembekile.
Eyona ndlela ibalaseleyo yokubonisa ubudlelwane bakho ngumxholo owunika abaphulaphuli bakho. Ke, kubalulekile ukuba ucele oontanga bakho ukuba babhale iindwendwe zakho, umzekelo.
Unokucela ukuba uphinde upapashe umxholo wabo wakudala (ohambelana nabaphulaphuli bakho) kwisiza sakho-kwaye, unokunika oontanga bakho ilungelo elifanayo lokuphinda bapapashe umxholo wakho wakudala.
Inzuzo enye yeli qhinga lokuwina-impumelelo kukuba yomeleza ukuthembela kunye nephothifoliyo zombhali zeiwebhusayithi. Olunye uncedo olunokuqwalaselwa kukuba ekubeni umxholo uya kuphakanyiswa kuthungelwano lwamaqela omabini, bobabini baya kufumana amakhonkco e-organic kunye nabathengi / abafundi abatsha. Iimpawu zakho ziba namandla emehlweni iindwendwe zakho ezitsha xa zibona intsebenziswano phakathi kwakho nolunye uphawu oluthembekileyo.
4. Ukubalisa ibali: Le yeyona nto ingamandla inamandla ekwenzeni uphawu. Zonke iivenkile ezinkulu zinamabali amakhulu aqhotyoshelwe kwiimpawu zawo kwaye abantu banomdla wokwabelana namabali.
Ukuba unembali engaguqukiyo, iya kwenza kube lula kuwe ukuba ubandakanye amakhonkco kunye namagama aphambili kwimiyalezo yakho kwaye oku kuya kukunceda ufezekise izikhundla ojolise kuzo kuGoogle TOP.
5. Ukuyila abathunywa benqanawa: Abantu bazimisele ngakumbi ukubathemba abanye abantu kunegama uqobo. Funda ukwenza uphawu lwendalo yakho enikezelwe ngabantu ngokunika ubuso kuyo.
Phuhlisa abantu abaza kuba ngabathwali beflegi yophawu lwakho kuyo yonke i-intanethi. Baza kunceda ukuxelela ibali lakho, ukwakha ulwazi kunye nokomeleza imbono yophawu lwakho ngendlela ebonakala ngathi ayisebenzi. Ezi nxusa zezazisi ziya kwenza amakhonkco aya kuvelisa ngakumbi ukugcwala kwindawo yakho kunye nokuphuculwa kwezikhundla zakho kuGoogle TOP.
Ukwakha ikhonkco kunokukunceda ukuba udale uphawu lomelele kwaye ukwakhiwa kwebranti kunokusetyenziswa ukukunceda ukwakha amakhonkco aphezulu aphezulu. Ukwakha ikhonkco kunye nokwakha ibranti kudityaniswa ngokuqinileyo ukuba iikhonsepthi zazo zihlala zigqwesile. Awungekhe wakhe brand ethembekileyo kwi-intanethi ngaphandle kwesakhiwo sokudibanisa kunye nokuphikisana. I-Semalt inezixhobo eziphambili kwimizi-mveliso yokuncedisa kokubini ukwakha indawo yokudibanisa kunye nokwakha uphawu kwimpumelelo yeshishini lakho.